बिरामीको पहिलो रोजाइमा भरतपुर अस्पताल | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
September 20, Fri
बिरामीको पहिलो रोजाइमा भरतपुर अस्पताल
जेठ ३० गते, २०७६ - ११:३१
चितवन । यहाँको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्छ । प्रचण्ड गर्मीका कारण असिनपसिन भएर पनि यस क्षेत्रका बिरामीको उपचारमा पहिलो रोजाइ भने यही अस्पताल हुने गरेको छ ।
जिल्लामा दुई सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज र २५ भन्दा बढी साना–ठूला अस्पताल छन् । पालो पाएसम्म अधिकांश बिरामीको रोजाइ सरकारी अस्पताल हुने गरेको छ । नेपाल चिकित्सक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष डा प्रकाश खतिवडा विज्ञचिकित्सकको समूह हुनु, धेरै विभागबाट सेवा पाउनु, निजीको तुलनामा निकै सस्तोमा उपचार र औषधि पाउनु, बिमालगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएकै कारण बिरामीको पहिलो रोजाइ भरतपुर अस्पताल भएको बताउछन् । यहाँका निजी अस्पतालमा एउटा विभागको एक विज्ञचिकित्सक हुने भए पनि सरकारी अस्पतालमा एउटै विभागमा १० सम्म विज्ञचिकित्सक छन् ।
सरकारी अस्पतालका चिकित्सककै भरमा यहाँका निजी अस्पताल चलेका छन् । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा विश्ववन्धु बगाले अस्पतालका विज्ञचिकित्सकसहितको उच्च गुणस्तरीय उपकरणका कारण बिरामीको पहिलो रोजाइ यस अस्पताल पर्ने गरेको बताउछन् ।
राजधानी बाहिर जोर्नी प्रत्यारोपण यही अस्पतालमा हुने गरेको छ । बगालेका अनुसार १२ उपकरणबाट निःशुल्क डायलासिस, २० श्ययाको सघन उपचारकक्ष, १२ श्ययाको बाल सघन उपचारकक्ष, सिटीस्क्यानजस्ता सेवा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध छन् । यससँगै न्यून शुल्कमा प्रयोगशालाको सेवा बिरामीले पाएका छन् । मुखभित्र पाइप हालेर पित्तथैलीको नलीभित्रको ढुङ्गा निकाल्ने इआरसिपी राजधानी बाहिर यहाँ मात्रै हुने बगालेले बताए ।
बगालेले औषधिमा उल्लेख गरेको दरभन्दा ५० प्रतिशतसम्म छुटमा ‘फार्मेसी’बाट बिरामीले औषधि किन्न पाएको जानकारी दिए । प्रसूतिको उपचारमा राजधानी बाहिरको उत्कृष्ट अस्पतालका रूपमा भरतपुर अस्पताललाई लिने गरिन्छ । राजधानीको प्रसूतिगृहपछि सबैभन्दा बढी बच्चा जन्माउने अस्पताल भरतपुर हो । अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार गत वर्ष १६ हजार २४३ महिलाले यहाँ बच्चा जन्माएका छन् ।
जिल्लामा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (बिमा)को प्रथम सेवाविन्दु भरतपुर अस्पताल हो । दैनिक ७०० हाराहारीले यहाँबाट बिमा सेवा लिने गरेको पौडेलको भनाइ छ । गरीब तथा असाहयका लागि पूर्ण छुटमा यसै अस्पतालबाट सेवा दिइँदै आएको छ । उपचारसँग सम्बन्धित सिफारिससँगै कानूनी प्रक्रियाका लागि पनि भरतपुर अस्पताल नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ । मृत्यु भएकाको शव परीक्षण र बेवारिसे शवको व्यवस्थापन यसै अस्पतालमा हुँदै आएको छ ।
अस्पतालमा १४ विभागमार्फत सेवा दिइँदै आएको छ । अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भएकाले बिरामीलाई केही सहजता मिल्ने गरेको छ । प्रवीणता प्रमाणपत्र र स्नातक नर्सिङ यहाँ पढाइ हुन्छ । यससँगै आवासीयरूपमा एमडी पढ्न नाम्सबाट विद्यार्थी आएको पौडेलले जानकारी दिए ।
विसं २०१३ मा १५ श्ययाबाट शुरु भएको भरतपुर अस्पताल अहिले ६०० श्ययामा पुगेको छ । दैनिक एक हजार ५०० हाराहारी बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिँदै आएका छन् । हालै मात्र यस अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास भएको छ ।
जेठ ३० गते, २०७६ - ११:३१ मा प्रकाशित
मेरुदण्ड, नशा र मांशपेशीविज्ञ सम्मेल
काठमाडाैं ।सरकारले स्थापना गर्न लागेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेरुदण्ड, नशा र मांशपेशीका...
धादिङ । सिद्धलेक गाउँपालिका–२ की मानसिकरूपमा कमजोर एक २७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला...
संवैधानिक कर्मबाट संविधानको पालना गरौँ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले संवैधानिक सोच, आचरण र कर्मका माध्यमबाट संविधान...
मैत्रीपूर्ण भलिबलको उपाधि कर्मचारी टोलीलाई
चिप्लेढुङ्गा । संविधान दिवसको अवसर पारेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको मैत्रीपूर्ण भलिबलको...
परिवार योजनामा बजेट वृद्धि गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको जानकारी
काठमाडौ । परिवार नियोजनका सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाल परिवार...
शेयरबजारमा थप दुई अर्ब बराबरको ‘म्युचअल फण्ड’ आउँदै
काठमाडौ । शेयरबजारमा सामूहिक लगानीका लागि महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा रहेको सामूहिक लगानी कोष योजना...
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरिय प्रहरी प्रभाग थलीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक...
यात्रु अभावमा सुकेटार विमानस्थलमा उडान भएन
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको एक मात्र सुकेटार विमानस्थलमा असारदेखि उडान हुन सकेको छैन । वर्षात्मा मौसम...
काठमाडौ । सिङ्गापुरमा आयोजना हुने तीन राष्ट्रबीचको त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी र ओमानमा हुने टी ट्वेन्टी...
अस्ट्रेलियाको टीभीमा रजस्वला हुँदाको रगत देखाउने विज्ञापन नियमसम्मत भएको ठहर
रजस्वला हुँदा आएको रगत भएको दृश्य समाविष्ट विज्ञापन नियमसम्मत रहेको र त्यसले प्रसारणको मापदण्ड उल्लङ्घन...
‘बिग बोस’का विजेताभन्दा प्रतियोगीको कमाइ धेरै, कसको कमाई कति ?
कम्युनिष्टसँग सिद्धान्तमा बहस गर्ने आएकाे छ – वरिष्ठ नेता पौडेल
फ्रान्सेली पर्यटकको हेलिकप्टरबाट उद्धार
भारत सरकारका आर्थिक नीतिहरुप्रति प्रियन्का गान्धीको यस्तो कटाक्ष
युवती भनेर ७० वर्षीया वृद्धालाई ४० वर्षीय रोहितद्वारा बलात्कार
यी हुन् संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट सम्मान पदवी पाउने व्यक्ति (नामावलीसहित)
चाडपर्व लागेसँगै फेरि बढ्यो सुनको मुल्य, जान्नुहोस् तोलाको कति ?
दसैलाई नोट साट्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यी हुन् उपत्यकाका २५ स्थान जहाँ नयाँ नोट साट्न पाईन्छ (सूचीसहित)
उपमेयर राई चढ्ने गाडीलाई लक्षित गरेर बम विस्फोट
एक उपसचिवको खुला पत्र : संघीयतालाई सफल बनाउने यी हुन् सुत्र !
विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षबाट संविधान दिवसको शुभकामना
विप्लव समुहद्वारा कमलबजार नगरपालिका कार्यालयमा बम विस्फोट
प्रहरी हवल्दारबाटै १२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास